I ukufumana amanqaku kuphela log in
kubalulekile I ukufumana amanqaku kuphela log in
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #516 by JanneAir15
Molo! Ndiye ndaphawula ukuba xa udale isihloko (njengoku) Andenzi ukufumana amanqaku 10 leyo into ufanele ukufumana xa ekudaleni isihloko okanye ezinye izinto ezifana ukuposa izimvo okanye ukuphendula ngaphezulu kwe 150 abalinganiswa kwisithuba. Ndathumela itikiti kubasebenzi kodwa ndingathanda ukubuza kwakhona ukusuka apha. Ngoko ke ngaba ndicela undincede?
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #540 by Colonelwing
Yeah Ndiye ndaphawula ukuba kakhulu ,, isiza iqonga French ayimniki amanqaku ...
Mhlawumbi into ayisebenzi ekunene mecanic software.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #561 by Gh0stRider203
Ndiza kukhankanya oku nabaqashi
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #563 by Dariussssss
Ukunyaniseka ngokupheleleyo, andazi nokuba qaphela ukuba ... ukuba kungakanani ebalulekileyo kum. Ndafika apha ukuze ufumane ezinye iinqwelomoya okuhle FSX ngeenxa apha Forum, ukunceda neengxaki enjoy nje kule ndawo emangalisayo, nto leyo ngenene ukhula, ngathi yonke imihla .... hayi ukuqokelela amanye amanqaku .. .
BTW, yintoni ukusetyenziswa ezo ngongoma?
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #564 by Gh0stRider203
UKUBA kwakho usiya igama lakho, uze Goto Points wam uza kubona oku kwikhusi, ukuba uza kunyuka ..
Qokelela amanqaku ukufumana imirhumo ezamahala Jumbo.
Jumbo 1 ngenyanga subscription = 1 000 nqaku, iinyanga 3 = 2 000 nqaku, iinyanga 6 = 3 500 nqaku, iinyanga 12 = 5 500 nqaku
I-2 iminyaka ye-4 imihla edlulileyo #611 by Kyrelel
Kuya kubonakala ngathi amanqaku angenawo ayenzeki, kwaye "i-My Points" sele isusiwe - ngoku, kufuneka sihlawule iJumbo? Ndandinayo (ndicinga) malunga namaphuzu e-2500.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #656 by Rolando
Bekuya kuba mnandi ukufumana ingcaciso malunga nale!
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #657 by Gh0stRider203
URolando wabhala: Kuya kuba mnandi ukufumana ulwazi malunga nale!
Awazi ukuba uza kukuxelela ntoni, kodwa. Kubonakala ngathi asinakufumana amaphulo okwenza izinto apha. Ndifana nje ebumnyameni njengowe.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #658 by rikoooo
Ndikhubaze inkqubo yenkcazo ngenxa yokuba sineengxaki ezininzi zobuchwepheshe kunye nayo, nangona kunjalo, kwi-futur sinokuyisebenzisa kwakhona xa sifumana ukukhwela kwezigciwane.
Ukuba unamaphuzu angaphezulu kwama-1000 ungangicela ukuba ubhalisele i-Jumbo yamahhala, ngoko ke amaphuzu akho apheli.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: PranavPoken, Gh0stRider203, JanneAir15
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #659 by Gh0stRider203
I ngebaba mhlawumbi kufutshane ukuba kwakungazange sele efanele lol
Ixesha ukwenza page: 0.332 imizuzwana